९ वर्षदेखि विवाहित महिलाले बिरामी भएपछि थाहा पाइन्, उनी महिला होइन पुरुष रहिछिन् कोलकाता। ३० वर्षकी एक महिला सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष भइसकेको थियो । तर, एक दिन उनी चक…. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/९ वर्षदेखि विवाहित महिलाले बिरामी भएपछि थाहा पाइन्, उनी महिला होइन पुरुष रहिछिन् कोलकाता। ३० वर्षकी एक महिला सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष भइसकेको थियो । तर, एक दिन उनी चक….
कोलकाता। ३० वर्षकी एक महिला सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष भइसकेको थियो । तर, एक दिन उनी चकित परिन् जब उनलाई थाहा भयो, उनी महिला होइन पुरुष हुन् । यो जानकारी उनले त्यतिबेला पाइन् जब उनी पेट दुखेपछि उपचारको लागि अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले जाँचपछि उनलाई क्यान्सर भएको बताए । त्यो यस्तो क्यान्सर थियो जुन पुरुषहरुलाई मात्र हुन्छ ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त के भने यी महिलाकी २८ वर्षीया बहिनी पनि पुरुष थिइन् र उनलाई पनि यसबारे कुनै जानकारी थिएन । हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार यी दुवै दिदीबहिनीलाई एन्ड्रोजेन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम (एआइएस) नामको समस्या भएको डाक्टरले बताएका छन् । एआइएस एक विशेष र दुर्लभ किसिमको स्वास्थ्य समस्या हो जसमा मानिस जन्मिँदा उसका जीनहरु पुरुषका हुन्छन् तर शरीर महिलाको जस्तै गरी विकसित हुन्छ ।
पश्चिम बंगालको बीरभूमकी यी महिला ९ वर्षदेखि विवाहित छिन् । पेट दुखेपछि उनी सुभाषचन्द्र बोस क्यान्सर अस्पतालमा उपचारको लागि गएकी थिइन् । अस्पतालका डाक्टर अनुपम दत्ता र डा. सौमेन दासले जाँच गरेपछि थाहा पाए कि उनी वास्तवमा पुरुष थिइन् । डाक्टरका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा उनी पूर्ण रुपमा महिला हुन् । उनको आवाज, शरीरको बनावट, बाहिरी अंग सबै महिलाकै छन् । तर, उनको शरीरभित्र यूट्रेस (पाठेघर) र ओभरिज (महिला अण्डकोष) छैन । यहाँसम्म कि उनको कहिल्यै पनि महिनावारी समेत भएको छैन ।
डाक्टरहरुका अनुसार उनलाई टेस्टिक्युलर क्यान्सर भएको छ जो पुरुषहरुलाई मात्र हुन्छ । यी महिला जुन दुर्लभ स्थितिमा छिन् त्यो समस्या २२ हजार जनामा एक जनालाई मात्र हुन्छ । यीमहिलामा पुरुष अण्डकोष छन् जो उनको शरीरभित्र छन् । यही अण्डकोषमा क्यान्सर भएको छ । टेस्टिक्युलर क्यान्सरलाई सेमिनोमा पनि भनिन्छ । यी महिलामा आम महिलाको जस्तै सबै बाहिरी प्रजनन अंग छन् तर उनी आमा बन्न सक्दिनन् ।
डाक्टरहरुले उनी पुरुष भएको पुष्टि गर्नको लागि क्यारियोटाइपिङ टेस्ट गराएका थिए । यो परीक्षणमा व्यक्तिको क्रोमोजोमको जाँच गरिन्छ । जाँचमा उनको क्रोमोजोम एक्सवाइ भएको पाइयो । यो पुरुष क्रोमोजोम हो । महिलामा एक्सएक्स क्रोमोजोम हुन्छ । अहिले बिरामीको किमोथेरापी भइरहेको छ । जाँचमा यी महिला, उनकी बहिनी र उनका दुई सानीमामा पनि यही समस्या रहेको पाइएको छ । डाक्टरका अनुसार यो समस्या जीनमा निर्भर गर्ने भएकोले उनको परिवारमा वंशाणुगत रुपमा यो समस्या देखिएको छ ।